ငရဲမီးအိုင်ထဲကခရစ္စမတ်ပွဲတော | Christmas in Hell | Real Conversion
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇဘာFလ ၁၁ရက်၊ လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ဟောကြားသောဒေသနာ၊by Dr. R. L. Hymers, Jr.
“ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့” (လုကာ၁၆း၂၅)
သူဌေးသည် သေဆုံးသွား၍ သဂြုFလ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။ သူ၏ဝိညာဉ်သည် မရဏာနိူင်ငံပြင်းပြ စွာဝေဒနာကို ခံစားရရှာပြီ။ “မရဏာနိူင်ငံ၌ ပြင်ပြစွာ ဝေဒနာကို ခံစားရလျှက်” (လုကာ၁၆း၂၃) ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ သူဌေးသည် “အဝေးကပင်” အာဗြံဟံကို မြင်ခဲ့ပါသည်။ “မီးလျှံ”၌ ပြင်းစွာခံရသောကြောင့် လက်များ၌ ရေနှစ်၍လျှာကို “အေးစေခြင်းငှါ” စေလွှတ်တော်မူ ရန်တောင်းပန်းခဲ့သည်။ (လုကာ ၂၆း၂၄) အာဗြံဟံကပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“အာဗြံဟံကလည်း၊ငါ့သားသင်သည် အသက်ရှင်စဉ်အခါ၊ ချမ်းသာရသည်ကို၎င်း လာဇရုသည် ဆင်းရဲ့စွာနေရသည်ကို၎င်း၊ အောက်မေ့လော့။ ယခုမူကား၊သူသည် သက်သာခြင်းရှိ၏။ သင်သည် ဒုက္ဒဝေဒနာခံရ၏။ ထိုမှတပါး ငါတို့နှင့်သင်တို့ စပ်ကြား၌အလွန်နက်လှသော ချောက်ကြီးတည်လျှက်ရှိ၏ ထို့ကြောင့် ဤအရပ်မှ သင်တို့ရှိရာသို့ ကူးချင်သောသူမကူးနိူင်။ ထိုအရပ်မှ ငါတို့ရှိရာသို့ကူးချင်သောသူ လည်းမကူးနိူင်ဟုဆို၏ (လုကာ၁၆း၂၅-၂၆)။
ယေရှုဘုရားသည် အပြစ်သားများအား ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ ငရဲမီးအိုင်ရှိကြောင်း သတိပေးလိုက်ချင်းဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းတပ် (Salvation Army) အသင်းတော်ကို တည်ထောင်ကြသော စီ၊အိပ်ခ်စပါဂျန်နှင့် ဝီလီလျံဘုပ်သည်လည်း ၂၁ရာစုနှစ်များ၌ ငရဲနှင့်ပါတ်သက်၍ ဟောကြားခြင်းမရှိ လှစ်လျူးရှုသွား မည်ကို စိုးရိမ်းတကြီးဖြစ်ကာ ၁၉ရာစု၊ နှစ်၌ကပင် သတိချပ်စေခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကြီးဘုတ်ကို အမေရိကန် သတင်းထောက်များက မေးမြန်းရာတွင် ၂၁ရာစု၊ နှစ်များအတွက်ကြီးမားသော အန္တရာယ်ကို ဖေါ်ပြပါအတိုင်း “ငရဲမရှိပဲ သုခဘုံမရှိနိုင်ပါ”ဟူ၍ သာဖြေကြားခဲ့သည်။ (The War Cry, January 1901, p. 7). နှစ်ယောက်စလုံး၏ကြိုတင်ဟောကြားချက်များ အမှန်ဖြစ်လာ လာခဲ့ပါပြီ။ ငရဲနှင့်ပါတ်သက်သော တရားဒေသနာအကြောင်းကိုမဟော၍ ပြီးမှာမဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာ ဂျေ၊ အိုင်၊ ဏခေုနမယ ဧဝိဂေလိဆိုင်ရာဓမ္မကတိက ပြောကြားရာတွင်၊
ခရစ်ယာန်အမှုတော်ဆောင်များ ငရဲအကြောင်းတရားဟဟော]ရမည်မှာ ထိုသူတို့၏ အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်၊ ဧဝံဂေလိဆရားများသည် မယုံကြည်သူ မိမိတို့၏အပေါင်း အသင်းများကို ကယ်တင်ခေါ်ဆောင်ရပါမည်။ ခရစ်တော်နှင့်ဝေးကွာပြီးအန္တရာယ် ကြီးစွာသော အခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေသော သူတို့ကို ပွင့်လင်းစွာ ရှင်းပြပြီး ကယ်တင်ရပါမည်။ ယေရှုနှင့်နောက်လိုက်များ၏ အသက်တာကို ဆင်ခြင်စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ သူတို့သည် ခန္တာကိုယ်သေရကြသည်။ယေရှုခရစ်တော်မပါပဲ သေခြင်း သည်တကယ့် ကြောက်လန့်ဖွယ်ဆိုးဝါး အခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သည်အတွက်နှင့်လူတိုင်းအား ငရဲ့နှင့် ပါတ်သက်၍ ဟောကြားဖို့လိုပါသည်။ (J. I. Packer, Ph.D., foreword to Whatever Happened to Hell? by John Blanchard, D.D., Evangelical Press, 2005 edition, p. 9).
ဒေါက်တာပတ်စ်ကာ၏ ဖေါ်ပြချက်များထဲက ဝေဖန်လိုတာတခုတည်းဘဲရှိပါတယ် ဒါကတော့ “ခရစ်ဧဝံဂေလိဆရာများ”ကသာ ငရဲအကြောင်းဟောပြာရမည်ဆိုခြင်းကို ဝေဖန်လိုပါသည်။ တမန် တော်ရှင်ပေါလုက ပြောကြားရာတွင် “သင်အုပ်ဆရာများလည်းဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းဆောက်ရွက်ရမည်” ဟုရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။(၂တိ၄း၅)။ သင်းအုပ်ဆရာများလည်း ငရဲနှင့်ပါတ်သက်၍ ဟဟော] ကြားရပါမည်။ ဤသည် သင်းအုပ်ဆရာများ၏ “လုပ်ငန်းတစ်ချို့ပင်” ဖြစ်သည်။ (ဏခေုနမယ ငဘငိ။).
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စံပြဖြစ်၍ “ပုံသက်သေများကို ချန်ထားပါသည်” (၁ပေ၂း၂၁)။ကျွန်ုပ် တို့အဖို့ ပုံနမူနာအတွက်ယေရှုသည် ငရဲနှင့် ပါတ်သက်၍ဝေငှခဲ့ပါသည်။ စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူဖြစ်လာဖို့ရန်၊ သင်းအုပ်ဆရာများသည် ငရဲနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာကို ဝေငှဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ခရစ်တော်ယေရှုသည် ရှင်းလင်းစွာ စိုးမောင်းထိုး၍ ငရဲအကြောင်းကို “သူဌေးနှင့်လာဇရု”အားဖြင့် ထင်ရှားစွာ သတိပေးဟောကြားခဲ့ပါသည်။ သူဌေးသည် သေလွန်ပြီး နောက်ငရဲ့၌ မီးလျံမီးတောက်လောင်ကျွမ်းခြင်းဝေဒနာကို ခံစားခဲ့သည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူဌေးသည် လက်ညိုးကို ရေ၌လျှာပေါ် အစက်ချပေးဖို့ အာဗြံဟံကို တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ အာဗြံဟံပြောကြားခဲ့သည်မှာ
“အာဗြံဟံကလည်း၊ ငါ့သား သင်သည်အသက်ရှင်စဉ်အခါချမ်းသာရသည်ကို၎င်း၊ လာဇရုသည် ဆင်းရဲစွာနေရသည်ကို၎င်းအောက်မေ့လော့။ ယခုမူကားသူသည် သက်တာခြင်းရှိ၏။ သင်သည်ဒုက္ဒဝေဒနာကို ခံရ၏ (လုကာ၁၆း၂၅)
“ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့ (လုကာ၁၆း၂၅)ထဲက ဤစကားလုံးနှစ်လုံးကိုပဲ အောက်နုတ်တင်ပြပါ မည်။
ယခုတွင်ခရစ္စမတ်ရာသီအခါ သမယရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ သင်းတော်များ၌ အလှဆင်၍ ရှိနေပေပြီ။ ခရစ္စမတ်ကယ်ရိုလည်း သီဆိုနေကြပါပြီ။ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ည ဆိုရင်ခရစ္စ်မတ်ပွဲတော်၊ စားသောက်ပွဲရှိပါတော့မည်။ ခရစ္စ်မတ်အချိန်အခါသမယ၌ ကျွန်ုတော်တို့ အသင်းတော်၌လည်း စနေနေ့ည ၇း၃၀၌ ခရစ္စ်မတ်အကြိုစပါတော့မည်။ အခုလိုခန့်နားထည်ဝါပြီး အဓိပ္ပါယ်များနှင့် ပြည့်စုံနေသော ခရစ်တော်မွေ့နေ့တော်မြတ်အချိန်အခါ သမယ်၌လည်း၊ ငရဲရှိနေ သည်ကို မမေ့မလျော့အမြဲအသိ၊ သတိရှိကြပါစို့။ ငရဲသည် အပြစ်၏အခပင်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ငရဲ ၌ပျေက်ဆုံးနေသော အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ဖို့ရန် ယေရှုသည် မွေးဖွါးလာခြင်းဖြစ်သည်။ လူတို့ကို မီးလျံမီးတောက်ထဲ ဝေဒနာခံရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊
“ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ရှိသောသူတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ၊ ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူသည် (၁တိ၁း၁၅)။
“ထိုသားသည် မိမိလူတို့ကို အပြစ်မှ ကယ်ချွတ်မည့်သူဖြစ်သောကြောင့် ယေရှု ဟူသောအမည်ဖြင့် မှည့်ရမည်ဟု ကောင်းကင်တမန်ဆို၏ (မဿဲ၁း၂၁)။
ခရစ္စ်မတ်၏ အဓပ္ပါယ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်မွမ်းမံ၍ ခန်းနားထယ်ဝါသော အဆောင်အယောင် များမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်မလား၊
၁။ ပထမ၊ သင်လျစ်လျူရှုထားသော တရားဒေသနာတော်ကို ပြန်သတိရပါ။
သင်နှလုံးသား အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် သင်ကြားလေ့လာခဲ့၍ ၊သင်သီဆိုခဲ့ဖူး သောတရားဒေသနာ တေးသွားများကို ပြန်သတိရပါ။ သင်ကြားနာ၍လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့သော တရားဒေသနာတော်ကို ပြန်သတိရပါ။ ပထမတွင် သင်အားစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ထာ၀ရအသက်ရှင်နှင့် ပတ်သက်နေသော တရားဒေသနာကို တွေးကြည့်ပါ။ (ရှင်မဿဲ၁၃း၁၉)ကို ဖတ်ကြည့်သောအခါ၊ နတ်ဆိုးသည်လာ၍သင်ကြားခဲ့သော နုတ်ကပတ်တော်များကို “နုတ်ယူ” တတ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“လမ်း၌ ရှိသောသူကား ၊တရားစကားကို ကြားသည်ရှိသော် ၊ယုံကြည်ခြင်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ၊ မာန်နတ်သည်လာ၍ တရားစကားကို နှလုံးထဲမှ နုတ်ယူသောသူကိုဆိုလိုသတည်း”(လုကာ၈း၁၂)
တရားဒေသနာကြားကြားခြင်း အစတွင်စာတန်အား ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ဖို့ အခက်တွေ့စေသည်။ တစ်လအကြာလောက်တွင် သင်သည် စာတန်၏ ထိုးနှက်ခြင်းကို သတိမမူတော့ပဲ ကြားနာရသော တရားဒေသနာအတွက် ငိုက်မျဉ်းအိပ်ပျော်စပြုလာမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင့်အသိဉာဏ် သည်မိုက်မဲလာပြီး ၊သင့်နှလုံးသားသည်လည်း စာနာမှုကင်းမဲ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် သူ၏ရန်သူကို ပြောကြားခဲ့သည် နည်းတူဖြစ်သည်။
“သင်တို့သည်ငါ့စကားကို နားမလည်ကြ” (လုကာ ၈း၄၃)
ထိုအချိန်တွင်သင်၏ အကြားအာရုံသည်လေးလံထိုင်းမိုင်း နေမည်ဖြစ်သည် “ဘုရားသခင် သည်ဟသူတို့ကို] မောဟလက်သို့ အပ်လိုက်တော်မူသည်”ဟု (ရောမ ၁း၂၈)၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
“ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့” (လုကာ၁၆း၂၅)။
ချစ်သမီး၊ သတိရလိုက်စမ်းပါဍ ငရဲမီးအိုင်ထဲ တရားဒေသနာတော်ကိုသတိရအောက်မေ့စေကာမူ ဘာမှ တတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ သင်အသက်တာအတွက် ငရဲမီးအိုင်ထဲ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကြီးကို မီးတောက်မီးလျှံထဲ ကျင်းစဉ်တွင် ဤတရားဒေသနာတော်က ချွတ်ယွမ်းချက်မရှိသင်သတိရနေပေ လိမ့်မည်ဍ ထိုငရဲမီးအိုင်ထဲတွင် သင်လျစ်လျူရှုထားသော တရားဒေသနာတော်ကို သင်ပြန်၍ သတိရလာပါလိမ့်မည်။
၂။ ဒုတိယ၊ သင်ငြင်းပယ် ဆန်းကျင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကို သင်သတိရပါ။
သင့်အသက်တာငရဲ၌ ခရစ္စမတ်ပွဲ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် သင်အသက်တာပြောင်းလဲပေးဖို့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ပဲပြင်မှုကို ထိုငရဲ၌ သင်သတိရနေပေလိမ့်မည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
“ဥပဇ္စျာယ်ဆရာသည် ရောက်လျှင် ၊ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်း၊အပြစ်စီရင်ခြင်း ကို၎င်း၊လောကီသားတို့အား ထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်” (ရှင်ယောဟန်၁၆း၈)
မိတ်ဆွေတို့ထဲက ၊မိမိတို့သည်ခရစ္စမတ်အချိန်အခါသမယ်ကို ငရဲ၌ကျင်းပခဲ့ပါသော် ဘုရားရှင်၏ ဝိညာဉ်တော်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ သင့်အားခေါ်ဖိတ်သံကို သတိရနေပေလိမ့်မည်။ ဝိညာဉ်တော်၏ပဲပြင်ခြင်းကို ငရဲထဲ၌သင်သတိရနေပေလိမ့်မည်။ သင့်မျက်စိမှစီးဆင်းသော မျက်ရည်များကို ငရဲ၌သင်သတိရနေပေလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ သင့်အထဲ၌ လုပ်ဆောင်ခြင်းများကို သင်ခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ပုံများ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သင့်ထံမှစွန့်ခွာ သွားသည်တိုင် သင်ငြင်းဆိုမှုကို ငရဲ၌သင်သတိရနေပေလိမ့်မည်။ ဘုရားရှင်သည်မိန့်တော်ခဲ့ဖူး သည်နည်းတူ
“ဧဖရိမ်သည် ရုပ်တုတို့၌ စွဲကပ်လျှက်ရှိ၏ သူ့ကိုတတ်တိုင်းရှိစေလော့” (ဟောရှေ ၄း၁၈)။
(၁၈၉၅-၁၉၈၀ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာအာရ်ရိုက်စ်သီကုံးသော “သင်သည် လက်ခံဖို့ဖင်းနှေးသော်” )။
“ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့ (လုကာ၁၆း၂၅)။
ချစ်သမီး အောက်မေ့သတိရလိုက်စမ်းပါဍ ကန့်လန့်ကာသည် စုတ်ဖြဲပြီး၊ အလင်းသည် ရုတ်ကနဲမည်းမှောင်လာ၍ သင့်ဝိညာဉ်သည်လည်း မီးတောက်မီးလျှံထဲ ကျရောက်မည်ကို သတိရလိုက်စမ်းပါဍ -ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့ဍ ငါ့သမီးအောက်မေ့လော့ဍ သင်လျစ်လျူရှုထား သောတရားဒေသနာတော်ကို အောက်မေ့ပါ။ သင့်ငြင်းဆန်ခဲ့သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို အောက်မေ့သတိရပါ။
၃။ တတိယ၊ သင်ရိုသေသမုမပြုခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်ကို သင်ပြန်သတိရပါ။
ခရစ်တော်ကို ရိုသေသမုပြုသည်ဟု သင်မပြောလိုက်ပါနှင့်၊ ထိုအကြောင်းကိစ္စနှင့်ပါတ်သက်၍ ညာမပြောလိုက်ပါနှင့်ဍ သင်သည် သခင်ကိုကကြည့်ခဲ့ဘူးဍ လုံး၀ကြည်ညိုးခံခြင်းမရှိခဲ့ပါဍ သမ္မကျမ်းစာတော်က သင့်သည်ခရစ်တော်ကို ငြန်းဆန်သည်ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်
“မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံးသောသူဖြစ်၏ ငြိုငြင်သောသူ၊ နာကြည်းခြင်းဝေဒနာခံရသောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မထိမဲမြင်ပြုခြင်းကို ခံလျှက်ရှိ၍ ငါတို့သည် မရိုသေကြ။ (ဟေရှောယ ၅၃း၃)
သင်သည် ခရစ်တော်အားရိုသေမည်ဆိုပါက၊ သင်သည် ယေရှုကိုတွေ့၏အောင်ရှာပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ခရစ်တော်အားရိုသေမည်ဆိုပါက သင်သည် သခင်ထံ (သင့်စွမ်းအားရှိသမျှ) “ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးဝင်ရောက်မည”ဖြစ်သည်။ (လုကာ၁၃း၂၄)။ သင်မည်ကဲ့သို့ ကြိုးစားပြီးသခင် ထံတိုးဝင်ခဲ့ဖူးပါသနည်း၊ လုသာ၊ဆုတောင်ခြင်းမျိုး၊ သင်လည်းဆုတောင်းခဲ့ဖူးပါသလား၊ ဂျွန်ဘန်ယန်ကဲ့သို့ ဝိညာဉ်တော်လောင်ခြင်းဖြင့် ကြိုးစားခဲ့ဖူးပါသလား၊ ဝိုက်ဖီးလ်ကဲ့သို့ အပတ် ပေါင်းများစွာအစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းခဲ့ဖူးပါသလား၊ ဝီစလီကဲ့သို့ မိမိကိုကို မိမိလမ်းမှန်ထက်ကြိုး စားရှာဖွေခဲ့ပါသလား၊ နှင်းမုန်းတိုင်းကြားထဲ ခရစ်တော်ကိုရှာဖွေခဲ့သော စပါဂျန်ကဲ့သို့သင်လည်း ကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပါသလား၊ ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ပြေပါမည် သင်သည် ကြိုးစား၍ သခင်ကို မရှာ ဖွေခဲ့ဘူး၊ တနေ့သင်သည် ငရဲထဲ၌၊ သင်သည် ပျင်းရိလျှက်ခရစ်တော်သခင်ကို လက်ခံဖို့ ဖင်း နှေးနေမှုများကို ပြန်သတိရအောက်မေ့ပါလိမ့်မည်။
“ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့။ (လုကာ ၁၆း၂၅)။
ချစ်သမီးအောက်မေ့သတိရပါဍ ငရဲရောက်မှ သင်သည် အောင်မေ့သတိရလာလိမ့်မည်ဍ ခရစ်တော် သခင်ကို ကြိုးစား၍မရှာဖွေခဲ့ခြင်းကြောင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာ၌ သခင်က၊
“ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲနှင့်ရှာလျှင်တွေ့ကြလိမ့်မည်။ (ယေရမိ၂၉း၁၈)။
ငါ့သား၊ အောက်မေ့လော့ဍ ငါ့သမီးအောက်မေ့လော့ဍ ခရစ်တော်သခင်ကို ကြည်ညိုးလေးစားခြင်းမ ရှိခဲ့မှုကြောင့် ထာ၀ရငရဲ၌ သင်ပြန်လည်သတိရနေပေလိမ့်မည်။ ကယ်တင်ခြင်းကို သင်လက်မခံ သောကြာင့် ထာ၀ရငရဲ၌ သင်ကိုယ်တိုင်ခံစားရပါလိမ့်မည်။
-သင့်နှလုံးသား အပြစ်နှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းပြည့်နှက်လျှက်ရှိ သင်သည်သခင်အားလက်ခံ
ရန်နှေင်းနှေးငြင်းဆန်လျှက် ဝိညာဉ်တော်အားစော်ကား ဘုရားအမျက်ဒေါသတည်
သင်သည် အမင်္ဂလာရှိ၏ ဝိညာဉ်တော်ရုပ်သိမ်းတော်မူ၏
-သင်အပြစ်တရားစီရင်ပြီးနောက် ဂရုဏာတော်ဟူ၍ မရှိပြီး သင်လက်ခံရန်ငြန်းဆန်း
ခဲ့သော ဝိညာဉ်တော်လည်း ရုပ်သိမ်း သင်လက်ခံရန်နှေးကွေးဝိညာဉ်တော်စွန့်ခွါသွား
(၁၈၉၅-၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာအာရ်ရိုက် သီကုံးသော
“သင်သည် လက်ခံဖို့ဖင်းနှေးသော်” )။
အကယ်၍သင်နှင့် ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့သွားဆွေးနွေးပါက သင့်အားငရဲနှင့် ပါတ်သက်၍
ကာကန်နှင့် မဆွေးနွေးစေလိုပါ။ သင့်အပြစ်နှင့် ယေရှုဘုရားအကြောင်းကိုပဲ ဆွေးနွေးစေချင်ပါ သည်။ သင်အပြစ်ကို ယေရှုတပါးကသာ ခွင့်လွှတ်နိူင်ပါသည်။ အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ် ကို ယေရှုဘုရားကသာ ခွင့်လွှတ်ဆေးကြောနိူင်သည်။ သင့်အပြစ်မှ ယေရှုထံတိုးဝင်ပြီး ကယ်တင် ခြင်းရယူလိုက်ပါ။
ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ သင်သွားပြီး ယေရှုအကြောင်းကို မပြောပါက သင်သည်ကြီးမားသော ကြောက်လန်စရာတွေကြုံပေမည်။ အကြံပေးပါရစေ၊ ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးမေတ္တာတော်အကြောင်း ပဲဆွေးနွေးခန်းထဲ၌ ဆွေးနွေးကြပါ။ အကြံပြုပါရစေ၊ ရွေးကောက်ခြင်းစပ်လျဉ်းပြီး သင့်အားရွေး ကောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခန်းထဲ၌ ဆွေးနွေးကြပါ။ အကြံပြုပါရစေ စာတန်မာန်နတ်၏ အကြောင့်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးကြပါ။ အကြံပြုပါရစေ၊ အပြစ်အကြောင်းနှင့် အပြစ်၏အကျိုးအ ဆက်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခန်းထဲ၌ ဆွေးနွေးကြပါ။ ငရဲအကြောင်းနှင့် တရားဟောနေပါသဖြင့် ဆွေးနွေးခန်းထဲ၌ ငရဲအကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြပါဍ
ယေရှုခရစ်အကြောင်းကို အဓိကထားတရားဒေသနာဟောကြားခဲ့သော်လည်း လူသားဇာတိအ လျှောက် ယေရှုခရစ်တော်နားလည်နိူင်ခြင်းလည်းမရှိပေ။ ယေရှုအကြောင်းစဉ်းစားနိူင်ခြင်းလည်းမရှိ ချေ။ “မထီမဲမြင်ပြုခြင်းကိုခံလျှက်ရှိ၍ ငါ့တို့သည် မရိုသေကြ”ဟု (ဟေရှာယ၅၃း၃)၌ ဖေါ်ပြထား ပါသည်။ သင့်အပြစ်မှ လွတ်မြောက်စေသောနည်းလမ်း ယေရှုအပြစ်မရှိချေ။ “ယေရှုအပြင်မည်သူ ကမှ အပြစ်သားများအား၊ မစနိုင်သူမရှိ” (၁၇၁၂-၁၇၆၈) ခုနှစ်ယောသပ်ဟတ်သီကုံးသော “အပြစ်ရှိသူလာနိူင်ကျူး” )။
သင်အပြစ်အားလုံးကေသစ်ရှမန် ဥယျဉ်ထဲ၌ ယေရှု၏ ခေါင်းတော်ပေါ် ကျရောက်ခဲပြီဖြစ် သည်။ သခင်သည် သင့်အပြစ်များအားလုံးကို ဥယျဉ်တော်ထဲ အမှုန့်ချေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ချွေးမှသွေးထွက်သည့်တိုင် သင့်အပြစ်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်နာကျင်ခြင်း ဝေဒနာများဖြစ်သော ဖမ်းဆီး၍ ရိုက်နှက်ခြင်းဝေဒနာများဖြစ်သော ဖမ်းဆီး၍ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ မေ့စေအထိုးခံရခြင်း၊ နံဘေး၌လည်းစုတ်ဖြဲသွားသည့်တိုင် သံချွန်ဖြင့် ထိုးနှက်ခြင်းကို သင့်အဖို့ခံခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်။ လျံတံဖြင့် နံဘေးကို အထိုးဖေါက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ “သွေးနှင့်ရေသည် ချက်ချင်းထွက်လာ၏” (ရှင်ယောဟန်၁၉း၃၄)။ သင့်အပြစ်အခအဖို့ ပြစ်ဒဏ်များအားလုံးခံစားခဲ သည်။ သွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်ဍ သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော် မူသည်ကား “ငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏” (၁ကော ၁၅း၃)။
အိုဍ သင့်အပြစ်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါလေဍ သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက် ကားတိုင်တော်တွင် အသေခံခြင်း၊ စီးထွက်လာသော အသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောပြီးဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်အားလုံးကို ယေရှုတပါးကသာ ဖြေလွှတ်ပိုင်သည်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါလေဍ သင့် အပြစ်ကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါဍ သင့်အပြစ်အားလုံးကို ဖြေလွှတ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း စဉ်းစားဆင် ခြင်ပါလေဍ ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ၊ “ယေရှုမှတပါးအပြစ်သားများကို မစကူညီနိူင်သူမရှိ” “ယေရှုမှတပါးအပြစ်သားများကို မစကူညီနိူင်သူမရှိ”။
-မျက်ရည်များအစဉ်ယိုစေ စိတ်အားကြီးမလျှော့မရွေ့ ဤမျှပင်အပြစ်မလွှတ် ကိုယ်တော်သာ သနားကယ်ချွတ် (၁၇၄၀-၁၇၇၈ ခုနှစ်၊ ဩရုတ်စတက်သီကုံးသော” မြဲတည်ကျောက်ကျူး” )။
“ယေရှုမှတပါး၊ ယေရှုမှတပါးအပြစ်သားများအား စမကူညီနိူင်သူမရှိ” သင်၏ရိုးရှင်းသော ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ ။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ်မှ လုကာ၁၆း၁၉-၂၅ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင်မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်အရိက်ဖက်စ်မှ ၁၈၉၅-၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်သီကုံးသော “သင်သည် လက်ခံဖို့ဖင်းနှေးသော်” ကျူးကိုသီဆိုပေးပါသည်။
(လုကာ၁၆း၂၃ယ၂၄ယ၂၅-၂၆း ၂တိ ၄း၅၊ ၁ပေ ၁း၂၁၊ ၁တိ ၁း၁၅၊ မဿဲ ၁း၁၅၊
၁။ ပထမ၊ သင်လျှစ်လျူရှုထားသော တရားဒေသနာတော်ကို ပြန်သတိရပါ။
မဿဲ၁၃း၁၉၊ လုကာ၈း၁၂၊ ယောဟန်၈း၄၈၊ ရောမ၁း၂၈၊
၂။ ဒုတိယ၊ သင်ငြင်းပယ်ဆန့်ကျင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကို သတိရလိုက်ပါ ယောဟန်၁၆း၈၊ ဟောရှေ ၄း၁၇
၃။ တတိယ၊ သင်ရိုသေသမုမပြုခဲ့သော ကယ်တင်ရှင်ကို သတိရလိုက်ပါ။ ဟေရှာ၅၃း၃၊ လုကာ၁၃း၂၄၊ ယေရမိ၂၉း၁၃၊ ယောဟန်၁၉း၃၄၊ ၁ကော၁၅း၃။